दुधे बच्चालाई ह्याप्पी क्रिसमस
ससाना बालबालिका जसलाई अभिभावकले नुहाइदिनुपर्छ, लुगा लगाइदिनुपर्छ, स्कूल पु¥याइदिनुपर्छ । बालबालिका भनेका मुछेको माटोजस्तो हो, जस्तो आकारको साँचोमा पनि ढालेर विकसित गराउन सकिन्छ । कुकुर दाँत नझरेका यस्ता ससाना बालबालिकालाई स्कूलले ह्याप्पी क्रिसमस भन्न सिकाउने, जैमिसी भनेर पढाउने, क्राइस्टको लुगा लगाएर, चुच्चै टोपी भिराएर र चकलेट खान दिएर घरघर पठाउनु भनेको नेपाली शिक्षा बन्न पुगेको छ ।
यही हो, नेपाली शिक्षा ? शिक्षाले नेपाली परम्परा, संस्कार, संस्कृति, असल हुने गुण सिकाउनु पर्नेमा ह्याप्पी क्रिसमस यसरी मनाएर यिनलाई कुन प्रकारले विकसित पार्दैछन् स्कूलहरु । खासगरी प्राइभेट बोडिङ स्कूलहरुको यस्तै दृष्टान्त देखियो यसपटकको क्रिसमस डेमा ।
चर्चहरुको निशानामा बालबालिका परेका छन् भन्ने प्रमाण हो यो । ठूला, हुर्केकालाई धर्मान्तरण गराउँदा उनीहरुले मन्दिर र संस्कार बिर्सन नसक्ने देखेपछि जगैदेखि इसाईकरण गर्नका लागि चर्चहरुले यो रणनीति अपनाएका हुन् ।
हिन्दु र बौद्ध धर्ममा जन्मेका बालबालिकाहरुलाई इसाईकरणको छाप पारिदिन चर्चहरुले यो नीति अख्तियार गरेका हुन् । प्राइभेट स्कूलहरुलाई आर्थिक सहयोग गरिदिने र बालबालिकाहरुलाई यसरी इसाई धर्ममा घुलमिल गराएपछि अर्को १५–२० वर्षपछि उत्पादन हुने शिक्षित युवाबर्ग सबै इसाई धर्माबलम्बी हुनेछन् । त्यतिबेला इसाई धर्म कसैले प्रचार गर्नैपर्दैन, यिनै देशका भविष्यले इसाई धर्म फैलाउने छन् । यो त अति भयो भने अभिभावकहरु चिन्तित देखिन थालेका छन् तर हिन्दुवादीहरु आर्तनाद गरेर बसेका छन्, यो अति भयो भनेर सरकारलाई कानुनको पालना गराउन र बालबालिकामाथि अत्याचार गर्नबाट रोक लगाउन दबाबी कार्यक्रम गर्न सक्दैनन् । सरकार त्यसै पनि पश्चिमा पकटमा गइसकेकाले सरकारलाई मात्र केको टनक टनक । सरकारमा बस्नेहरु शुभलाभ हेरिरहेका छन् ।
क्रिसमस डेमा सरकारले बिदा दिएको छ । यो बिदाको लाभ उठाएर निजी स्कूलहरुले क्रिसमस डे मनाए । के सबै निजी स्कूलहरुमा इसाई धर्मा मान्ने छन् ? शिक्षा आर्जन गर्ने थलोलाई इसाई धर्म प्रचारको गढ बनाउन पाइन्छ कि पाइन्न ? कलिला बालबालिकाको दिमागमा इसाईकरणको छाप हान्ने अवसर बनाइयो । शिक्षाविदहरु यसरी उन्मुक्ति दिनु भनेको अराजकता फैलाउनु हो । शिक्षा मन्त्रालयले नियमन गर्नैपथ्र्यो । मनोरञ्जन गराउने नाममा धर्मान्तरणको यो दुस्प्रयास भोलि धार्मिक बिखण्डन र हिंसा फैलाउने साजिस पनि हुनसक्छ ।
अन्तमा नेकपाको सर्वहारावाद
आमनागरिक र नेकपाका नेता । नाना, छाना र खाना नभएका जनताको हात शीरमा राख्न लगाएर आशीर्वाद लिने नेकपाका नेता हुन् देवेन्द्र पौडेल । पौडेल नेकपाका पार्टी संगठन विभागका संयोजक पनि रहेका छन् । यस्ता नेता भएपछि नेता सुकिलो मुकिलो र जनताको हालत दयनीय हुनु स्वभाविक हो ।